Ryan Reynolds ရဲ့ဇာတျကားတှကေိုမကွညျ့ဘူးလို့ အံ့အားသငျ့ဖှယျပွောကွားလိုကျတဲ့ Gerard Butler – SoShwe
Home/Entertainment/Ryan Reynolds ရဲ့ဇာတျကားတှကေိုမကွညျ့ဘူးလို့ အံ့အားသငျ့ဖှယျပွောကွားလိုကျတဲ့ Gerard Butler
So Shwe May 18, 2022	Entertainment Leaveacomment
Gerard Butler ကဘယျလောကျအထိ လှတျလှတျလပျလပျ နထေိုငျပွုမူတတျလဲဆိုတာကို ပရိသတျတှအေားလုံး သိရှိပွီးသားဖွဈမှာပါ။ Copshop ဇာတျကားထဲမှာ သူက ဗဈဒဈအဖွဈ Grillo’s Teddy ကို ဖမျးဆီးသတျဖွတျဖို့ ကွိုးစားတဲ့နရောကနေ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ သူ့ကိုယျသူ ထောငျအကခြံပွီးတော့ကို ဒီလိုမြိုးဆောငျရှကျဖို့ ကွိုးစားခဲ့သူအဖွဈ သရုပျဆောငျခဲ့ရတာဖွဈပွီး ဒီဇာတျကားထဲမှာ Butler အပွငျ Frank Grillo, Alexis Louder နဲ့ Toby Huss တို့ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားကွပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ဆယျစုနှဈတဈခုအတှငျးမှာ Butler က ဟဲဗီးဝိတျရုပျရှငျဇာတျကားတှေ၊ သဘာဝဘေးအန်တရာယျ သရုပျဖျောထားတဲ့ ရုပျရုငျဇာတျကားတှကေို အဓိက ရိုကျကူးသရုပျဆောငျခဲ့သူလညျး ဖွဈပါတယျ။ Copshop နဲ့ပတျသကျလို့ Butler က “ခငျဗြားတို့သိလား။ ကြှနျတျော ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ တျောတျောဆိုးနတေဲ့ကာလအတှငျးမှာ ဒီဇာတျကားကို လုံးဝရှုပျထှေးရောပွှမျးနပွေီး ပြျောစရာပိုမြားတဲ့ ဇာတျကားလို့ ခံစားခဲ့ရပါတယျ” ဆိုပွီး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ဆကျလကျပွီးတော့လညျး Butler က “ဒီလူတှအေကုနျလုံးကို အခနျးတဈခနျးထဲချေါထညျ့သှားပွီး ပြျောစရာတှေ၊ စိတျလှုပျရှားစရာတှေ၊ ကွောကျစရာ၊ ဒေါသထှကျစရာနဲ့ စိတျကူးယဉျဆနျတဲ့အရာတှကေို ပွုလုပျခိုငျးပွီး နောကျဆုံးတော့ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ပကျြစီးခွငျးနဲ့အတူ အဆုံးသတျလို့ရတာပေါ့။ ခငျဗြားတို့ ဒါကိုမမွငျခငျြရငျ ဘယျလိုလုပျကွမလဲ” လို့ဇာတျကားနဲ့ပတျသကျလို့ ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒီဇာတျကားအပျေါမှာ Louder ကလညျး “Gerard Butler, Frank Grillo, Joe တို့အပွငျ ဒီဇာတျကားထဲမှာ ပါတဲ့လူတှနေဲ့ အလုပျလုပျရတာ တကယျပြျောဖို့ကောငျးပါတယျ။ သူတို့က ကြှနျမကို တနျးတူဆကျဆံပွီး သငျယူစရာလိုတာတှေ၊ သိဖို့လိုအပျတာမှနျသမြှတှကေို ပွောပွကွပါတယျ” လို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
Reynold ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ GTA ဂိမျးစတိုငျ ဇာတျကားတဈကားဖွဈတဲ့ ‘Free Guy’ ဇာတျကားအကွောငျးကို ပွောတဲ့အခါမှာလညျး Butler က “ကြှနျတျော ဒီဇာတျကားကို မသိဘူးဗြ” လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီနောကျ Louder က Butler ကို ဒီဇာတျကားက Reynold ရဲ့ဇာတျကားဖွဈကွောငျး ပွောပွခြိနျမှာတော့ Butler က “အိုး…. ဟုတျလား။ ငါ Ryan Reynold ကားတှမေကွညျ့ဘူး” လို့ ပွနျလညျကာကှယျ ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။
Butler ဟာ Puerto Rico ဒသေမှာ နထေိုငျရငျး ရုပျရှငျရိုကျကူးနခေဲ့ပွီး ရုပျရှငျဇာတျကားတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ အဆကျအသှယျပွတျနတေဲ့ပုံပါပဲ။ ဒါပမေယျ့လညျး Reynold ရဲ့ဇာတျကားတှနေဲ့ Butler အမှနျတကယျ အစေးမကပျတာလား၊ ဒါမှမဟုတျ သူတို့နှဈယောကျအကွား ဘယျလိုအကွောငျးအရာတှရှေိခဲ့ဖူးလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဒီစကားပွောခနျးထဲမှာ ထညျ့သှငျးမေးမွနျးခြိနျမရခဲ့ဘဲ နောငျတဈခြိနျမှာတော့ သခြောပေါကျဖျောထုတျရဦးမယျ့အကွောငျးအရာအဖွဈ မှတျသားထားရမှာလညျးဖွဈပါတယျ။
Ryan Reynolds ရဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုမကြည့်ဘူးလို့ အံ့အားသင့်ဖွယ်ပြောကြားလိုက်တဲ့ Gerard Butler
Gerard Butler ကဘယ်လောက်အထိ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေထိုင်ပြုမူတတ်လဲဆိုတာကို ပရိသတ်တွေအားလုံး သိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ Copshop ဇာတ်ကားထဲမှာ သူက ဗစ်ဒစ်အဖြစ် Grillo’s Teddy ကို ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့နေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ သူ့ကိုယ်သူ ထောင်အကျခံပြီးတော့ကို ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့သူအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ Butler အပြင် Frank Grillo, Alexis Louder နဲ့ Toby Huss တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းမှာ Butler က ဟဲဗီးဝိတ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ ရုပ်ရုင်ဇာတ်ကားတွေကို အဓိက ရိုက်ကူးသရုပ်ဆောင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Copshop နဲ့ပတ်သက်လို့ Butler က “ခင်ဗျားတို့သိလား။ ကျွန်တော် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် တော်တော်ဆိုးနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာ ဒီဇာတ်ကားကို လုံးဝရှုပ်ထွေးရောပြွမ်းနေပြီး ပျော်စရာပိုများတဲ့ ဇာတ်ကားလို့ ခံစားခဲ့ရပါတယ်” ဆိုပြီး ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း Butler က “ဒီလူတွေအကုန်လုံးကို အခန်းတစ်ခန်းထဲခေါ်ထည့်သွားပြီး ပျော်စရာတွေ၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ၊ ကြောက်စရာ၊ ဒေါသထွက်စရာနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့အရာတွေကို ပြုလုပ်ခိုင်းပြီး နောက်ဆုံးတော့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပျက်စီးခြင်းနဲ့အတူ အဆုံးသတ်လို့ရတာပေါ့။ ခင်ဗျားတို့ ဒါကိုမမြင်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ” လို့ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားအပေါ်မှာ Louder ကလည်း “Gerard Butler, Frank Grillo, Joe တို့အပြင် ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ပါတဲ့လူတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာ တကယ်ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ သူတို့က ကျွန်မကို တန်းတူဆက်ဆံပြီး သင်ယူစရာလိုတာတွေ၊ သိဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှတွေကို ပြောပြကြပါတယ်” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Reynold ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ GTA ဂိမ်းစတိုင် ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်တဲ့ ‘Free Guy’ ဇာတ်ကားအကြောင်းကို ပြောတဲ့အခါမှာလည်း Butler က “ကျွန်တော် ဒီဇာတ်ကားကို မသိဘူးဗျ” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် Louder က Butler ကို ဒီဇာတ်ကားက Reynold ရဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ကြောင်း ပြောပြချိန်မှာတော့ Butler က “အိုး…. ဟုတ်လား။ ငါ Ryan Reynold ကားတွေမကြည့်ဘူး” လို့ ပြန်လည်ကာကွယ် ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
Butler ဟာ Puerto Rico ဒေသမှာ နေထိုင်ရင်း ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့ပုံပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း Reynold ရဲ့ဇာတ်ကားတွေနဲ့ Butler အမှန်တကယ် အစေးမကပ်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် သူတို့နှစ်ယောက်အကြား ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေရှိခဲ့ဖူးလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဒီစကားပြောခန်းထဲမှာ ထည့်သွင်းမေးမြန်းချိန်မရခဲ့ဘဲ နောင်တစ်ချိန်မှာတော့ သေချာပေါက်ဖော်ထုတ်ရဦးမယ့်အကြောင်းအရာအဖြစ် မှတ်သားထားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Tags Actors Free Guy Gerard Butler Hollywood Ryan Reynolds
Previous သခွေငျးတရားနဲ့လကျတဈလုံးအကှာကရှငျသနျခဲ့တဲ့ ဆယျကြျောသကျမိနျးကလေးငယျ။
Next အမှားလုပျမိတဲ့ ဝနျထမျးတှကေို အလုပျထုတျခွငျးမလုပျဖို့ အကွံပွုလာတဲ့ Twilio ကုမ်ပဏီ CEO